Sakoroka tao Ambohimasina Betafo : Ny zava-nisy marina -
AccueilSongandinaSakoroka tao Ambohimasina Betafo : Ny zava-nisy marina
Niteraka savorovoro sy korontana tao amin’ny kaomina Ambohimasina distrikan’i Betafo ny feo niely fa misy toby Silamo miorina ao an-tampon’ny tendrombohitra iray ao Antsahondra ao amin’ny tanàna antsoina hoe Valavato, kaomina Manohisoa distrika Betafo. Nambaran’ireo fokonolona ao Ambohimasina fa tao anatin’ny dimy taona nisian’io toby io dia maro ny fatin’olona tsy fanta-piaviana hita nanakaiky io tanàna io sy ny fisiana zaza very. Nampiahiahy ny mponina ny fandrenesana io vavao io, ka samy efa niandry kendry tohina hisiana zava- mitranga ny iray tanaàna. Inoana tokoa fa nisy fijoroana vavolombelona zazalahy iray antsoina hoe Rakotomalala , nilaza fa nisy naka an-keriny tao amin’io toby io no nambarany fa nitazonana azy nandritra ny roa andro. Nambaran’ity farany fa teo am-pakana vilona tao Anjazafotsy Betafo izy ny Sabotsy lasa teo no nisy nanabeda, fofona gazy no nolazainy fa reny farany ka nanomboka teo izy dia tsy nahatsiaro tena intsony raha tsy efa teny an-tampon’Antsahondra Valavato. Ny alatsinainy alina tokony ho tamin’ny 10 no nambarany fa nahatafavoaka azy tao amin’ilay toby rehefa nanaraka ny dian’ireo mpanatitra sakafo azy. Nihevitra mantsy ireto farany fa mbola nalemy sy tsy nahatsiaro tena i Rakotomalala, ka tsy dia niraharaha loatra araky ny nambarany. Tafaporitsaka ihany i Rakotomalala araka ny fitantarany ka nitsoaka nandositra.
Ny talata 10 jolay vao mangiran-dratsy no tonga tao Ambohimasina izy rehefa naterina olona sendra azy teny an-dalana.
Notantarainy antsipirihiny ny nahazo azy ka teo noho teo ihany dia vory ny fokonolona ary nampandre ny zandary ny zava-misy. Niandry ny fahatongavan’ny mpitandro filaminana ny fokonolona araka ny fanazavana, saingy tsy nisy nipoitra ireto farany. Nandray fepetra ny fokonolona ka nanisy sakana ny lalana. Tamin’io fotoana io no nisy fiara tsy mataho-dalana roa nandalo ny tanàna. Nogiazan’ny fonokolona avy hatrany ireo fiara ireo noho izy avy ao Antsahondra Valavato toerana tsy atokisan’ny fokonolona loatra. Naterin’ny fokonolona teny amin’ny zandary ny mpamilin’ilay fiara tsy mataho-dalana. Ny alin’io ihany anefa dia nambaran’ny fokonolona fa navotsitry ny zandary ireo mpamily roalahy ary novakiany ny sakana nataon’ny fokonolona. Tezitra mafy tamin’izany ny fokonolona tao Ambohimasina ka ilay fiara 4×4 roa nogiazany no niharan’ny hatezaram-bahoaka ka nopotehina tsy nisy noraisina intsony.
Taorian’izay dia nirohitra nankeny amin’ilay toerana voalaza fa nanagiazana ilay zaza ny fokonolona an’arivony maro niaraka tamin’ireo fikambanana zaza mena sy zaza mainty hanamarina sy hizaha ilay toerana fa misy mosquée sy Silamo mpangala-jaza. Nialoha lalana rahateo ny zandary izay efa nahare mialoha ny vaovao. Mbola tsy tafiditra tao antampontsahondra anefa dia efa nihatrana am-bava basy ny miaramila avy ao amin’ny DAS Manohisoa ka nitifitra avy hatrany vao nahatazana ny fokonolona sy zaza mainty, ary ny zaza mena nilanja fitaovam-piadiana toa ny sabatra sy lefona, vokany olona iray no voatifitra. Nihemotra noho izany ny fokonolona ary namela ny zandary hanelanelana.
Nisy ny fifampiresahana ka niafara tamin’ny fizahana ilay toerana voalaza ho nanagizana ilay tovolahy kely ihany. Tsy nahita na inona na inona anefa tao amin’ilay tanàna, ary tsy nisy ihany koa ilay mosquée voalaza ery ambony. Tsy misy mitombina avokoa araka izany ny voalaza fa misy silamo izany tao amin’io tanàna io. Tsaho no nandeha, kanefa tsaho niteraka fahasimban-javatra maro.